जियोसेन्ट्रिक मार्केटिंगको हब्रिस | Martech Zone
मंगलवार, मार्च 18, 2008 आइतवार, नोभेम्बर 3, 2013 Douglas Karr
जब जियोसेन्ट्रिसममा हेलियोसेन्ट्रिसमको तर्क गरे त्यसबेला कोपर्निकस यथार्थ रूपमा आधुनिक कालका खगोल विज्ञानका जनक थिए। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सूर्य हाम्रो ग्रहहरूको प्रणालीको केन्द्र थियो, पृथ्वी होइन। यो निन्दनीय थियो र उनी विद्वानहरूको सम्पूर्ण संस्कृतिको बिरूद्ध थिए जुन त्यसबेला धर्मसँग गाँसिएको थियो। तर ऊ सहि थियो।
मार्केटिंगमा लागू गरियो, आज हामीसँग यो मुद्दा छ। केही कारणका लागि, जब कम्पनीहरू ठूला हुन्छन्, तिनीहरूले सोच्न थाल्छन् कि तिनीहरू कुनै प्रकारले हाम्रो वाणिज्य प्रणालीको केन्द्र हो। आज, म किनारा पुरस्कार पुरस्कारहरु मा बोर्डरहरु बाट एक ईमेल प्राप्त भयो - एक नयाँ कार्यक्रम बोर्डरहरु अर्को कम्पनीहरु लाई परिचय गर्न को लागी उनीहरू संग खरीद गर्न को लागी गर्न सक्छन्:
म किनाराहरू प्रशंसक सडकमा बार्नेस र नोबल नखोलुन्जेल म बारम्बार आउँथें किनाराहरू लगभग हरेक सप्ताहन्तमा। मलाई उनीहरूको पसलहरू, उनीहरूको लाइभ संगीत, र उनीहरूको कफि मनपर्छ। म प्रायः त्यहाँ घण्टा आराम गर्ने र पढ्ने गर्थें।
किनाराहरू यसमा आफ्नो रणनीति समायोजित भएको देखिन्छ - सम्भवतः टाउकोमा जान कोशिस गर्दै अमेजन। फरक स्थिति छ, जबकि। अमेजनले सधैं आफैंलाई एक खुदरा र वितरण विशाल Hellbent को रूप मा स्थिति छ दुनिया को व्यापार को तरीका परिवर्तन गर्न मा। किनाराहरू पुस्तक पसलहरू खोलिए।
हबिस: अत्यधिक गर्व वा आत्म-विश्वास; अहंकार।
म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि यो गल्ती हो। वाणिज्य संसारको केन्द्र तपाईको स्टोर को वरपर छैन, यो तपाईको ग्राहकको वरिपरि छ। यदि ग्राहकले तपाईंलाई पुस्तक भण्डारको रूपमा देख्छ भने, संसाधनहरू लागू गर्न जारी राख्नुहोस् जहाँ उनीहरू तपाईंलाई सबैभन्दा अधिक इनाम दिनेछन्। यस्तो प्रकारको सोच खतरनाक हो र यसले तपाईंको कम्पनीको फोकस गुमाउन सक्दछ र यो उद्योगमा अधिकार हो। यदि तपाईं केहि बन्न चाहानुहुन्छ भने केहि अरू बनाउनुहोस्!
म बोर्डरहरू मार्फत होटेल कोठा वा सूट किन्न गइरहेको छैन! पुरस्कारहरू मेरो लागि असंगत हुन्छन् जब तपाईं मलाई हथौड़ा गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, एक वर्ग, एक गोल प्वालबाट।
टैग: सीमानाहरूसीमाना पुरस्कारइमेल मार्केटिङ
मार्क्स 18, 2008 मा 7: 39 PM
महान अन्तरदृष्टि फेरि डगलस। जब म भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नो सामग्री निर्देशित गरेको देख्छु मैले पनि त्यहि कुरा सोचें। यो माइक्रोफोनको साथ सम्पूर्ण विश्वको अगाडि उठ्नु र पहिलो प to्क्तिमा मात्र बोल्नु हो।
ब्लग विश्वव्यापी रूपमा, स्थानीय रूपमा पिउनुहोस्!
मार्क्स 18, 2008 मा 7: 59 PM
म त्यो प्रयोग गर्दैछु, डेभ! मन पराउँछु!
मार्क्स 19, 2008 मा 6: 38 PM
जस्तो प्रकारको म्याकडोनाल्ड्स लाट्टेसको सेवा गर्दैछ, जबसम्म तिनीहरू बर्गर स्वाद हुँदैन ... lol
मार्क्स 19, 2008 मा 7: 05 PM
जसको कुरा गर्दै ... के तपाईंले त्यो देख्नु भयो? म्याकडोनाल्ड कफी स्टारबक्स भन्दा राम्रो समीक्षा थियो?
मार्क्स 19, 2008 मा 7: 24 PM
केवल प्रतीक्षा गर्नुहोस् - स्टारबर्गरहरू उनीहरूको बाटोमा छन्। आशा छ कि तीनिहरु पनि जलाउँदैनन्।
मार्क्स 19, 2008 मा 8: 43 PM
मई 6, 2008 मा 5: 04 PM
"जस्तो प्रकारको म्याकडोनाल्ड्स लाट्टेसको सेवा गर्दैछ, जबसम्म तिनीहरू बर्गरको स्वाद हुँदैन? Lol"
हे, ग्वाटेमालामा, म्याकडोनाल्डसँग "म्याकफे" छ। यो म्याकडोनाल्ड्समा थपिएको एक छुट्टो कोठा हो, र यसले राम्रो तरिकाले कार्य गरिरहेको छ। व्यक्तिलाई वास्तवमै यो मनपर्दछ। स्टारबक्सले यसलाई 9too महँगो बनाउन सक्दैन, र ग्वाटेमाला हो जहाँ राम्रो कफी सुरु हुन्छ)।
तपाईंको शीर्षकमा मेरो पुन: प्लेका लागि मेरो वेबसाइट हेर्नुहोस्।